Home Wararka Gudiyadii Baarlamaanka Soomaaliya oo loogu baaqay in ay dalka badbaadiyaan
Iyada oo siyaasadda Geeska Afrika ay ka bilaawday isbaheysiyo la doonayo in Soomaaliya lagu go’doomiyo ayaa hadana siyaasadii Arimaha Dibadda ee Soomaaliya waxa ay gacanta u gashay hogaan aan qiimayn karin culeyska siyaasadeed ee dalka soo foodsaaray. Madaxweynihii, Ra’iisal Wasaarihii iyo Wasiirkii Arimaha Dibada ee Soomaaliya waa ay kala socdaan mana jirto qorshe ay ku mideysan yihiin sadaxdooda. Halka Baarlamaankii Soomaaliyana albaabada loo xiray, shaqaalihii Wasaaraada Arimaha Dibada cidna lama socodso meesha wax mar ayaan intooda badan waxa laga qariyay qorshooyinka dowlada waaba hadii ay jiraan.
Dhanka kale dalka Kenya ayaa awoodiisa aqooneed, siyaasadeed iyo tan dhaqaale u istcimaalayo in ay Soomaaliya go’doomiso. Madaxweyne Farmaajo oo u arko Soomaaliya makhaayad uu isaga leeyahay ayaa talaadii Arimaha Dibadda ee dalka isaga ku soo dhamaatay isaga oo aan awood aqooneed iyo mid dadnimo ulahaynin maareeynta Siyaasada Arimaha Dibadda ee Soomaaliya.
Dowlada Kenya oo ah dowladaha ugu dhaqaalaha badan ee Afrika laguna sheego in ay leedahay tirar adag oo Arimaha Dibadda oo xoogan ayaa waxa ay bilaawday olole ay danaheeda gaarka uga iibinayso wadamada dariska la ah Soomaaliya iyo kuwa caalamka.
Aqoonyahan Maxamed Xaaji Ingiriis ayaa yiri “Soomaaliya ilaah baa u maqan, hadii lagu sii daayo Farmaajo iyo kooxdiisa Maareynta Siyaasada Arimaha Dibadda Soomaliya waxa ay ku dhaceysaa god ay adkaan doonto in dib looga soo saaro”.
Waxaa uu intaas ku daray “Madaama uusan dalka ka jirin mucaarad talo ka go’ado waxaan kula talinaynaa in Gudiyadda Baarlamaanka ee u xilsaarnaa kor jooghteynta Siyaasada Arimaha Dibada ay shaqdooda qabsadaan oo ay u yeeraan madaxda dalka oo ay kula xisaabtamaan geedi socodka Siyaasada Arimaha Dibadda dalka”.
Cabdullahi Shirwa oo ka mida bulshada rayidka ayaa sidoo kale sheegay in Baarlamaanka uu isaga tago shaqada ama uu qabsado shaqdii loo igmaday Soomaaliya. Waxa uu yiri “..war sidaan Soomaliya laguma fiirsan karo”